आज सुनको भाउ घट्यो ! – NepalDailyPost
नेपाल डेली पोस्ट २०७६, १६ मंसिर सोमबार १४:४३
आज सुनको भाउ घट्यो !
सुनको भाउ दुई सयले बढेको छ। आज साताको सोमबार सुनको भाउ दुई सयले बढेर ७१ हजार ४ सयमा कारोबार भईरहेको छ। हिजो भने ७१ हजार ६ सयमा कारोबार भएको थियो। त्यस्तै, सुनसँगै चाँदीको भाउ पनि घटेको छ। आज चाँदीको भाउ ५ रुपैयाँले घटेर ८ सय ५०मा कारोबार भईरहेको छ।
PREVIOUS Previous post: जनकपुरमा सामूहिक विवाहको राैनक – एउटै मण्डपमा १०८ जोड़ीको बिहे
NEXT Next post: प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यमा उल्लेखनीय सुधार